Macbook အတွက် USB-C ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူပထမဆုံးမော်နီတာများ ငါက Mac ကပါ
၁၂ လက်မ Macbook အသစ်စတင်ပြီးကတည်းကအသုံးပြုသူများသည်ဤပစ္စည်းကိုဝယ်ယူရန်စဉ်းစားနေကြသည် အဆုံး၌၎င်းကိုမလုပ်နိုင်သည့်အကြောင်းပြချက်မှာ USB-C port ဖြစ်သော Macbook တွင်တစ်ခုတည်းသောဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည် သင် plug in လုပ်ချင်သမျှကိုလုံး ၀ ချိတ်ဆက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ Brand အသစ် Macbook နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သည်။
ငါကပထမ ဦး ဆုံးမဟုတ်သလိုငါကတောင်းဆိုဖို့နောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ ဒီတစ်ခါလည်း Apple ကသူ့ရဲ့ Macbook အသစ်မှာဒီဆက်သွယ်မှုကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်အပြစ်ပြုမိခဲ့, သို့သော်မည်သည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းမျှမရှိသော်လည်း၎င်းသည် port တစ်ခုတည်းဖြင့် Mac ကိုလွှတ်တင်လိုက်ခြင်းသည်အနည်းငယ်အန္တရာယ်များသည်။
ပထမဆုံးဖြေရှင်းချက်ကတော့ဆိပ်ကမ်းဝယ်ဖို့ပါ Apple ကကျွန်တော်တို့ကိုအလွန်အကျွံစျေးနှုန်းဖြင့်ကမ်းလှမ်းသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောအလားအလာနှင့်ဘက်စုံသုံးမှုအားအပြည့်အဝရယူနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူစဉ်ဆက်မပြတ်သယ်ဆောင်ရမည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်စတင်ပြီးဖြစ်သည်။
ငါတို့က dock ကို ၀ ယ်စရာမလိုဘူးလို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုပြင်ပမော်နီတာတစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ချင်တယ်ဆိုရင် Lenovo နဲ့ Acer ကဒီနေ့ Las Vegas မှာကျင်းပနေတဲ့ CES မှာပြသခဲ့ပါတယ်။ USB-C ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူမော်နီတာမျိုးစုံမည်သည့် adapter အမျိုးအစားကိုသုံးစရာမလိုဘဲ၎င်းကို Macbook နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်အောင်။
ဒါ့အပြင်မော်နီတာကလက်တော့ပ်ကိုစွမ်းအင်ဖြည့်တင်းပေးတာကြောင့်ဘက်ထရီကုန်သွားတော့မှာကိုစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ Lenovo က ၂၄ လက်မမော်နီတာနှစ်ခုကို resolution နဲ့ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ် $ 1920 များအတွက် 1080 x ကို 399 နှင့်အခြား 27 လက်မ, တစ် ဦး resolution ကိုအတူ 3840 x ကို 2160 $ ​​799 မှာစျေးနှုန်း.
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့် Acer သည် ၂၅ လက်မနှင့် ၂၇ လက်မမော်ဒယ်နှစ်မျိုးကိုပြသခဲ့သည်။ resolution သည် 25 x 27 နှင့်လာမည့်လ မှစတင်၍ ဈေးကွက်တွင်ရောင်းချနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ $ 499,99 တစ် ဦး စတင်စျေးနှုန်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » ပစ္စည်းများ » Macbook အတွက် USB-C ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူပထမ ဦး ဆုံးမော်နီတာများ
Apple Pay သည်ဘဏ်အသစ်များနှင့်ချေးငွေအဖွဲ့အစည်းအသစ် ၅၄ ခုကိုထပ်ဖြည့်ခဲ့သည်